HomeWararka CaalamkaGermany: 4 qof oo ku dhaawacantay toogasho ka dhacday jaamacada Heidelberg
January 24, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta 0
Booliiska magaalada Heidelberg ee Koonfur-galbeed ee Jarmalka ayaa maanta oo Isniin ah sheegay inay hawlgal ballaaran ka wadaan jaamacadda magaaladaas, kaddib markii afar qof ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday.
Maamulka ayaa sheegay in nin uu la soo galay hoolka Jaamacada oo ka socotay muxaadaro, isagoo wata qori dheer kadibna uu rasaas ku furay.
Wakaalada wararka ee Jarmalka ee DPA ayaa sheegtay in hal qof oo dumar ah ay u dhimatay dhaawacii soo gaaray ka dib markii madaxa laga toogtay, iyadoo soo xiganeysa laamaha ammaanka.
Booliska ayaa sheegay in ninkii toogashada geystay oo u muuqday in uu keligiis falka geystay uu dhintay. Booliiska ayaa warbaahinta Jarmalka u sheegay in ninka toogashada geystay uu isagu isku dilay hubkii uu watay.